Home Horyaalka Germalka Chelsea iyo bayern Munchen kuma biiri doono Erling Haalan oo hadlay.
Chelsea fursad uma lahan inay la soo saxiixato Erling Haaland iyadoo weeraryahanka dilaaga ah uu soo jiitay kaliya lix naadi hadii uu ka tago Borussia Dortmund xagaaga.
20 jirka ayaa lagu soo waramayaa inuu kaliya u saxiixi doono Liverpool, Manchester City ama Manchester United Premier League, halka uu sidoo kale xiiseynayo Real Madrid, Barcelona ama Juventus.
Noorwiijigu waa mid ka mid ah guryaha ugu wanaagsan kubada cagta adduunka wuxuuna dhaliyay 33 gool oo la yaab leh 31 kulan oo uu u saftay Dortmund ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan.
Taasi waxay kaliya kordhisay xiisaha ay u qabaan kooxaha waa weyn ee Yurub ka hor inta aysan dhici karin inay 100 milyan ginni u dhaqaaqaan inta lagu jiro suuqa xagaaga.
Sida laga soo xigtay Sport Bild, Haaland wuxuu ku soo koobay taageerayaashiisa nus-iyo-tobankii la soo sheegay, isagoo ka dhimay Chelsea iyo Bayern Munich.
Bild wuxuu leeyahay weeraryahanku wuxuu aad u jecel yahay kooxda Real Madrid iyadoo kooxda reer Spain ay u baahan tahay nin muddo dheer ku guuleysta booska Karim Benzema oo 33 jir ah.
Man City waxay rajeyneysaa isku xirnaanta qoyska in aabihiis, Alf-Inge, oo horey ugu soo ciyaaray iyaga ay cadeyn doonaan Qiimaha suuqa ee Haaland ayaa haatan ah ku dhawaad 100 milyan ginni oo ah 90 milyan ginni qandaraaskiisa Dortmund ma dhaqan geli doono ilaa 2022.
Si kastaba ha noqotee, warbixinta ayaa sheegeysa in ka tagista Westfalenstadion koox kale oo sarre xagaagan inaysan dhibaato ku aheyn ciyaaryahanka, gaar ahaan haddii ay ku guuldareystaan inay u soo baxaan Champions League.
Dortmund, oo hoos timaada maamulka ku meel gaarka ah ee Edin Terzic, ayaa haatan ku jira kaalinta shanaad ee Bundesliga laakiin kaliya seddex dhibcood ayeey ka dambeysa Eintracht Frankfurt oo ku jirta kaalinta afaraad.
Rajada ay ka qabaan inay ku guuleystaan horyaalku waxay u muuqdaan kuwa fog fog iyadoo hogaamiyaasha Bayern Munich ay durbaba 13 dhibcood ka horeeyaan iyadoo 11 kulan ay harsan yihiin.
Waxay u gudbeen semi-finalka Koobka Jarmalka iyagoo 1-0 kaga badiyay Borussia Monchengladbach habeenkii talaadada.
Waxaana ay si fiican ugu fadhiyaan inay gaaraan wareega sideeda kadib ciyaartii 3-2 lugtii hore ee ay kaga badiyeen Sevilla bishii hore.
Waxa uu dhaliyay 43 gool oo cajiib ah 45 kulan oo uu u saftay Dortmund tan iyo markii ay kala soo saxiixdeen Red Bull Salzburg qiyaastii 15 milyan ginni bishii Janaayo 2020.
Previous articleMikel Arteta oo ka hadlay Shaqada tababarnimo ee kooxda barcelona.
Next articleMacalinkii hore ee kooxda barcelona Pep guardiola oo ka hadlay waqtiga xun ee kooxdiisii hore ku jirto.